कोरोनाबाट इटलीमा २४ घण्टामा ७ सय ४३ ले ज्यान गुमाए ! – Sagarmatha Online News Portal
कोरोनाबाट इटलीमा २४ घण्टामा ७ सय ४३ ले ज्यान गुमाए !
काठमाडौं । विश्व व्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को संक्रमणका कारण नराम्रोसँग प्रभावित भएको इटलीमा २४ घण्टामा ७ सय ४३ जनाको मृत्यु भएको छ । यो संख्या सोमबारको भन्दा १ सय ४१ ले बढी हो ।
इटलीमा हालसम्म कोरोनाका कारण ६ हजार ८ सय २० जनाको ज्यान गइसकेको छ । इटलीमा आइतबार र सोमबार मृत्युको संख्या केही कम देखिएको थियो । तर मंगलबार फेरि बढ्नाले चिन्ता थपिदिएको छ ।
बढ्दो मृत्युलाई हेर्दा इटलीमा कोरोनाको कहर तत्काल रोकिने संकेत नदेखिएको बीबीसीले लेखेको छ । कोरोना संक्रमणका कारण इटलीमा बिहीबार ४ सय २७, शुक्रबार ६ सय २७ र शनिबार ७ सय ९३ जनाको मृत्यु भएको थियो । तर आइतबार घटेर ६ सय ५१ र सोमबार झन् घटेर ६ सय २ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो । मंगलबार भने बढेर ७ सय ४३ जनाको मृत्यु भएको छ । यो संख्या सोमबारको तुलनामा १ सय ४१ ले बढी हो ।
इटलीमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएकाहरुको संख्या ६९ हजार १ सय ७६ छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)का अनुसार कोरोना भाइरस १ सय ९५ देशमा फैलिएको छ । यसबाट १८ हजार ९ सय ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ४ लाख २२ हजार ४ सय ८५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।